သင်မြန်မာပြည်ရဲ့ ဥပဒေတွေအကြောင်း သိချင်ပါသလား?ဘာအမှုတွေပဲတက်တက် သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေအကြောင်း လေ့လာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှုတက်တက်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သင်စကားလုံးတစ်ခုခုကို နားမလည်လို့ အခက်တွေ့နေပါသလား? ဘာပဲရှာရှာမှာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများ အဘိဓာန်ရှိပါတယ်။ စကားလုံးပေါင်းများစွာကို မြန်မာ တိုင်းရင်းသား စကားလုံးတွေနဲ့ပါ ယှဉ်တွဲတွေ့ရတော့ သင့်အတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေတာပေါ့။
သင့်ပစ္စည်းပျောက်သွားရင် ဘယ်မှာရှာရမှန်းမသိလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား? ပစ္စည်းတွေမက လူပျောက်ကြော်ငြာတွေပါ တင်လို့ရတဲ့အတွက် ဘာပဲပျောက်ပျောက်မှာ ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါ။
သင်နေဖို့အိမ် လိုက်ရှာနေပါသလား? ဘယ်မှာနေနေမှာ အိမ်ငှားနေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ဝယ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြေကွက်ကိစ္စ ဝယ်/ရောင်း တွေပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေရာထဲမှာ စုစည်းထားတဲ့အတွက် သင့်အတွက် မခက်ခဲတော့ဘူးပေါ့။
သင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို လိုချင်လို့ ဝယ်ချင်တဲ့အခါ ဘယ်မှာဝယ်ရမှန်း မသိလို့ စိတ်ရှုပ်ခံမနေပါနဲ့။ ဘာပဲဝယ်ဝယ်မှာ ပစ္စည်းစုံ ရောင်းချပေးတဲ့အတွက် ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါ။
သင်အလုပ်ရှာနေတဲ့အခါ သင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ် ရှာမရတဲ့အတွက် စိတ်ညစ်နေပါသလား? အလုပ်အမျိုးအစားပေါင်းစုံနဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာတွေပါတင်လို့ရတဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ်မှာ ဝင်ရောက်ရှာဖွေလိုက်ပါ။
သင်ကားဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးနေပါသလား? ဘာကားစီးစီးမှာတော့ ကားမျိုးစုံ၊ ဝယ်လက်/ငှားလက်တွေကအစ အပိုအလှဆင်ပစ္စည်းအဆုံး ရောင်းနိုင်၊ဝယ်နိုင်တဲ့အတွက် တစ်နေရာတည်းမှာ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
သတင်းဦး၊ သတင်းထူး တွေကို ဦးဦးဖျားဖျား သိရှိလိုပါသလား? ဘာပဲထူးထူးမှာတော့ သင်သိရှိလိုတဲ့ သတင်းထူးမှန်သမျှကို တင်ပေးထားတဲ့အတွက် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သွေးလှူဒါန်းခြင်းက အင်မတန် မွန်မြတ်သော အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သွေးလှူချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတဲ့အခါ ဘယ်မှာလှူရမှန်းမသိလို့ အခက်တွေ့နေပါသလား? ဘာသွေးလှူလှူ မှာတော့ သွေးလှူဒါန်း နိုင်တဲ့ ဆေးရုံ/ဌာန အပြင် သင်သွေးလှူဒါန်းတဲ့အခါ စာရင်းသွင်းထားဖို့ ဖောင်လေးလဲလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ သွေးလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားပေါင်းများစွာကို တစ်နေရာထဲမှာဖတ်လို့ရတဲ့အတွက် သင့်အတွက်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါတယ်။
All the material, content, infrastructure, tour packages and available reservation services on this website are owned, operated and provided by www.shwe.net (ShweNet) and are protected under related existing laws of Myanmar. Certain names, words, titles, phrases, logos, icons, graphics or designs in the pages of this Website may constitute trade-names, trade-marks or service marks of ShweNet or its affiliates, or ShweNet or its affiliates may have been licensed to use them. The display of trademarks, trade names or service marks on pages on this Website does not imply thatalicense of any kind has been granted to anyone else.
All visitor to our website (www.shwe.net) are free to download the material posted on this website for non-commercial use purpose, to keep temporarily on the particular computer or other related devices and to print it (if needed) for your own personal purposes. You agreed that you do not acquire or violate the ownership rights of any downloaded materials and/or contents. You may refrain from distribution of the copies of material and/or contents for any purpose or frame it in any site you create or operate. You agree to abide by all copyright notices, information and restrictions contained in any content on this Website. Unauthorized downloading, transmission, publication or other copying or modification (including partial or whole) of material posted on this Website, including trademarks, trade names and service marks, may violate common or civil law, trademark law and copyright law, other related laws and may result in legal action. ShweNet reserves the full right to take legal action against any unlawful use of the trade-names, trademarks and images of ShweNet and its affiliates found on this website.
The services provided by of ShweNet are available only to individuals who can form legally binding contracts under applicable law, and thus, are not available to minors. By using this site, you represent that you are of sufficient legal age to use this site and to create binding legal obligations for any liability you may incur asaresult of the use of this site. You may use www.ShweNetcrusies.com to make legitimate reservations or purchases, but you cannot use the website to make any speculative, false or fraudulent reservation, any reservation in anticipation of demand, or for any purpose that is deemed unlawful or prohibited by these Terms and Conditions. ShweNet may, in its sole discretion, terminate or restrict your access to the Web site, in whole or in part, at any time without notice and without liability to ShweNet.
The website may contain links to other website. ShweNet does not control any third party website therefore not responsible for the content of any linked website or any link contained inalinked website. We provides such links only asaconvenience to you and the inclusion of any link does not imply endorsement, investigation or verification by ShweNet of the linked website or any information contained in it.
Notwithstanding anything contained in these Terms and Conditions to the contrary, ShweNet shall not be responsible for indirect damage, damage arising from consequential damage or special circumstances, including but not limited to loss of revenue, loss of profit, loss of use, loss of opportunity, arisen out of the performance or non-performance of obligations under this Terms and Conditions.
Myanmar Net Portal is brought to you by
Myanmar's Internet: မြန်မာ Net / Myanmars Net / Shwe Net
2-Time Winner of Myanmar ICT Awards since 1998.